लकडाउनमा मनको स्याहार कसरी गर्ने ?- मनोविद गोपाल ढकाल - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
लकडाउनमा मनको स्याहार कसरी गर्ने ?- मनोविद गोपाल ढकाल
आइतवार, बैशाख २१, २०७७ (May 3, 2020, 8:15 am) मा प्रकाशित
आइतवार, बैशाख २१, २०७७, मनोविद ।
शरीर र मन एक अर्काका परिपुरक हुन । शरिरमा समस्या आउदा मनमा पनि असर पर्छ। साथै मनमा समस्या आउदा शरिरिक लक्षणहरु पनि देखिन सक्छन। लकडाउनको समयमा सेल्फ क्वारेन्टाइन वा सेल्फ आईसोलेसनमा बस्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा पनि बिशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ । अन्यथा आफ्नो मनको स्याहार सुसारमा ख्याल नपुर्याउदा मनोसामाजिक समस्या वा मनोरोगको जोखिम बढछ ।
प्राकृतिक विपत्ति वा प्रकोपहरु पर्दा, कोरोना भाईरसले रोग ब्याधि फैलिदा वा मानव सृर्जित ठुला ठुला घटनाहरुले स्वभावैले मनोबैज्ञानिक वा मानसिक रोग समेत स्वभाबैले बढेर जान्छ ।
संकटको बेला मनमा पर्ने असर भने ब्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुनसक्छ। कसलाई कति असर पर्छ भन्ने कुरा ब्यक्तिको उमेर, लिङ, स्वंय ब्यक्तिको शारीरिक, मानसिक अबस्था, ब्यक्तित्व, परिस्थितिसँग जुझ्ने ज्ञान, सीप, मानसिक क्षमता, अनुभव, तनाब ब्यबस्थापनको तौरतरिका, दैनिक जीवन शैली, ब्यक्तिले प्राप्त गरेको सहयोग जस्ता कुरामा भरपर्छ ।
बिपतिमा सबैले आफुलाई समाल्न सक्छन् भन्ने पनि हुदैन। उनिहरुलाई सहयोगको जरुरत पर्दछ । प्रकोपको मानसिक असर लामो समय सम्म नरहोस तथा मनोसामाजिक समस्या वा मानसिक रोगको जोखिम नबढोस भन्नका लागि भावनात्मक सहयोगको जरुरत पर्दछ ।
बिपतिको बेला ब्यक्तिको मनमा देखा पर्ने त्रास, भय, छटपटि, मानसिक अशान्ति, नैरस्यता र यसको कारण आउन सक्ने व्यवहारजन्य गडबडीलाई ब्यबस्थापन गर्ने दिईने सबै प्रकारका ब्यबहारिक र भावनात्मक सहयोग नै प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग हो । प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग पाउदा ब्यक्तिको मनमा शान्ति , स्थिरता आउँछ । तनाब ब्यबस्थापन गर्न सहयोग मिल्छ । दैनिक जीवनमा पर्किन सजिलो हुन्छ ।
मनको स्याहारसुसार कसरी गर्ने ?
१. करोनाको संक्रमणबाट ज‍ोगिन लकडाउनको पुर्ण पालना गर्नुपर्छ। सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्छ । सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा र सुरक्षाका उपायहरु अपनाउदा मन ढुक्क हुन्छ । यसले डर, त्रास, भय, चिन्ता धेरै कम भएर जान्छ । आफू स्वास्थ छु भन्ने आत्मबल बढछ।
३. कोरोनाको जोखिमबाट जोखिन सत्य तथ्य जानकारी त लिने तर अति सतर्क हुने, चाहिने भन्दा बढि जानकारी लिन खोज्ने, समचार पटक पटक हेरि रहने जस्ता व्यवहार गर्नु हुदैन ।
४. सामाजिक सञ्जाल , इन्टरनेट चलाएर बस्ने भन्दा आफ्नो रुचिको काम गरेर समय बिताउ सकिन्छ । परिवारसँग कुराकानी गर्ने, खेल खेल्न, किताब पढ्ने, लेख्ने,मनोरञ्जन गर्ने, रमाईला र ज्ञान बर्द्धक फिल्म हेर्ने गर्न सकिन्छ । घरयासी काममा समय दिन सकिन्छ ।
५. तनाब कम गर्न शारीरिक ब्यायम, योग, मेडिटेसन, श्वास प्रस्वासको ब्यायम, ध्यान केन्द्रीत गर्ने अभ्यास तथा अन्य आरमदायी अभ्यासले ठूलो मदत पुर्‍याउछ । तनाबको बेला पर्याप्त निदाउनु पनि जरुरी हुन्छ ।
आफ्नो स्व-हेरचाहका बाबजुद पनि कोरोनाको प्रकोपले गर्दा मनोसामाजिक समस्या देखापरेमा बिज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । लकडाउनको अबधिभरी मार्क नेपाल मनोसेवा केन्द्रमा फोन गरेर निशुल्क सेवा लिन सकिन्छ ।
निशुल्क सेवा लिन लागि ९८१३५२७७३२ मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ ।